यो मात्र एउटा बिकल्प छ
विश्व कोरोना भाइरसको महामारीबाट आफ्नो मुलुकलाई मुक्ति दिने उपायहरु खोज्दैछन्, निकाल्दैछन् । हाम्रो मुलुक भने सत्ताको छिनाझप्टीको सिकार बनेको छ । अरु मुलुकले दैवीप्रकोप, भाइरस प्रकोप, अन्य प्रकोपहरुविरुद्ध जुटेर मुकाविला गरिरहेका छन् । हाम्रो मुलुकमा यस्तै महामारी आइलागेका बेलामा भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, नातावाद, व्यभिचार बढ्दै गएका छन् । कस्तो मुलुक होला यो । एकजनाले बडो चित्त दुखाएर भन्थे– यो मुलुक त ०४६ साल पछि सकिदै गएको छ । अहिले त झन छिटो मटियामेट हुनेगरी सकिने संकेत प्रष्टैसँग देखिन थालेको छ । हुन पनि सरकारमा बसेर सरकारी जग्गा हडप्ने, जनताको जीवनमरणको समस्यामा पनि भ्रष्टाचार गर्ने, आफ्नाहरुको श्रीबृद्धिका लागि मुलुकवासीकै गर्धन रेट्न पछि नपर्ने । कस्ता कस्ता व्यक्तिलाई सत्तामा पु¥यायौं ? अझै पनि चेत फिरेको छैन । चुनाव भयो भने नेपाली जनताले यिनै अपराधिक सोच भएकाहरुलाई जिताउने छन् ।
यता जनता कोरना महामारकिा कारण लडकडाउनमा छन्, इन्तु न चिन्तुमा छन् उता सत्तामा बसेकालाई फोहरी खेल सुरु गर्न हतारो छ । कसरी समस्याको समाधान गर्ने भन्ने कुनै सोच नै छैन । कसरी अप्ठेरोमा परेका नागरिकको उद्धार गर्ने ? यिनलाई चिन्ता र चासो नै छैन ।
सत्ताको हानाथापमा केही समयका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको जागीर जोगिएको छ । पार्टीभित्रका प्रतिपक्षीहरुको मुखबुजो लागेको छ । वामदेवले पनि चिची पापा पाउने भएका छन् । पार्टी झण्डै झण्डै टुक्रिनबाट बचेको छ । मध्यावधिको खतरा पनि टरेजस्तो देखिन्छ । यिनको खेलमा जनताले जितेका पाल्पा २ का सांसदलाई राजीनामा गराएर राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने र उपचुनाव गराएर वामदेवलाई जिताउने अनि प्रधानमन्त्री बनाउने, अहिलेको खेल यत्तिमा टुङ्गिएको छ । वामदेवले चुनाव हारे भने के हुन्छ ? एमालेभित्र खिचडी पाक्न सुरु भइसकेको छ ।
यी सबै घटना यति नै बेला किन ? महामारीसँग जुध्ने कि सत्ताको भागबण्डामा लाग्ने ? यो घटनालाई रोक्नका लागि नेपाल र चीनका राष्ट्रपतिको फोन वार्ता र चिनियाँ राजदूतको सक्रियताले काम गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । माधव कुमार नेपालसँग चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखको लामो वार्ताले पनि असर पारेको थियो । नेपाली राजनीतिमा, अझ नेकपाको राजनीतिमा चीन यसपाली सबैले देखिनेगरी निर्णायक फेक्टर बन्यो । यो दक्षिणले सहजै पचाउला ? दक्षिणको प्रतिक्रियाले राजनीतिमा अर्को भुइँचालो ल्याउन सक्ने देखिदैछ ।
यद्यपि पश्चिमा र चीनवीचको कोरोना भाइरसबारे बढ्दै गएको वाकयुद्धको कारण चीन सक्रिय भएको र ओली सरकार बचेको बताउनेहरुको पनि कमी छैन । विजय जो सुकैको होस्, हार विपतमा परेका, हाहाकार खेपिरहेका नेपाली जनताको भएको छ । गैरजिम्मेवार र जवाफदेहीताविहीन सरकारबाट जनतामा नैराश्यता हदैसम्म बढेर गएको छ ।
विपदमा नेकपाले आफ्ना भोटरलाई राहत बाँडेको देखियो । बिभेद र निषेध यस्तो आपतका बेलामा पनि नेकपाले नै ग¥यो । विदेशीएकालाई घर फर्कन रोक्ने र आफ्नालाई उद्धार गरेर भोट बैंक बलियो पार्ने काम पनि नेकपाले नै ग¥यो । घर फर्किन महाकाली नदीमा हामफाल्ने परिस्थिति पनि नेकपाले नै ल्यायो । आफ्ना नागरिकका प्रति यतिसम्मको गैरजिम्मेवार सरकार यसैपाली देखियो । सरकार जनताको पीडामा देखिनुपर्छ, समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ, राहत र उपचारमा सक्रिय हुनुपर्नेमा सत्ताको घीनलाग्दो खेलमा देखियो । लोकतन्त्र नेपालीका लागि दुर्भाग्यमात्र बन्यो । विदेशमा नेपालीहरु संक्रमित छन्, रोजगारीमा गएकाहरु बेरोजगार बनिसकेका छन्, तिनको उद्धारमा समेत सरकार अन्यौलमा छ । नागरिक गुहार लगाइरहेको छ, सरकार सुन्दैन, सुन्नै चाहदैन । नेपालमा रहेका नेपाली बिल्लिबाठमा छन्, विदेशबाट फर्कनेको लर्को फर्केपछि कुन हालत होला ? व्यवस्थापनबारे कुनै योजना छैन, कुनै छलफल र निराकरणको उपाय खोजिएको छैन । सत्ता र भ्रष्टाचार, यसैमा सत्ताधारी र प्रतिपक्षीको सम्पूर्ण ध्यान देखिन्छ ।
हामी नागरिक पनि उस्तै छौं । सामाजिक सञ्जाल, मिडियाहरुबाहेक सरकार र प्रतिपक्षीहरु कसैसँग सवालजवाफ गर्ने हिम्मत राखेनौं । भोलि लकडाउन खुलोस्मात्र त्यसपछि सबै बिर्सिन्छौं हामी । भ्रष्टाचार, अनियमितता, नागरिकप्रति सरकारले गरेको अत्याचार, बेइमानी सबै बिर्सन्छन् नेपालीहरु । जबसम्म जनतामा इख र चेत खुल्दैन, तवसम्म नेताहरुले नेपालीप्रति दास मनोवृत्ति राखिरहन्छन् । जनता जनताजस्ता हुनुपर्छ । पार्टी कार्यकर्ताजस्ता भएपछि पार्टीहरुले मनपरी त गर्छन् गर्छन् ।